Ukuba ufuna imveliso ephezulu yokufota, iqhawe lethu liyakudinga yile nto uyifunayo. Yinkonzo yethu yemveliso yokufota yeprimiyamu, ebandakanya yonke into evela kwinkonzo yethu esemgangathweni kunye nokunxibelelana okungaphezulu kunye nesisombululo esingcono.
Iziphumo zokukhanyisa, ukulahla izithunzi kunye nokubonakalisa, imibala yangemuva enemibala, imibala yomoya, kunye neembono ezimangalisayo zezinye zeendlela esizisebenzisayo ukuqinisekisa ukuba iifoto zakho zokugqibela zemveliso ziyile nto uyifunayo.
❖ UMFANEKISO WE-GHOST MANNEQUIN
I-mannequin sisilumko sotyalo-mali olunye esikunika ukubonakala okwenzelwe ngaphandle kwemodeli. Ukuba ufuna ukubonisa iimpahla zakho hayi eyomntu, sebenzisa isiporho sendoda. Sinokukunceda wenze i-ghost mannequins enikezela ubungakanani bengubo yakho, nokuba ufuna ukudibana, intamo nje, okanye i-mannequin epheleleyo.
PH UMFANEKISO WOBUGCISA BEMFANEKISO
Ukufota ngokuhombisa ubucwebe kwimveliso nganye kubalulekile ukuqinisekisa ukonwaba kwabaxhasi kunye nentengiso. Sinokukunceda ekwandiseni ukuthembeka kwakho kunye nokwenza imeko yobungcali. Ukufota okuhonjisiweyo okumgangatho ophezulu kubalulekile, ngakumbi xa umfanekiso uyiyo yonke into efunekayo ukuthengisa isiqwenga.
Sidubula iigugu kwizibane ezifanelekileyo kunye nomgangatho ofanelekileyo. Sibonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngokujongana neziphene ezincinci ezithintela umgangatho wempahla yakho yonke.
Ukuba unqwenela iimfuno ezizodwa zeefoto zakho zemveliso, ezinje:
Imodeli yesandla seStudio
Imifanekiso yeNdlela yokuPhila
60360 Ividiyo ejikelezayo
Ungathembela ekuzalisekeni kwepanda ukuhambisa ezona zibalaseleyo!
KUTHENI UZALISEKA IPANDA?
Thina eFulfill Panda sinikela ngeefoto ezikumgangatho ophezulu ezibonisa iimveliso zakho ngendlela eya kuthi ixhase abathengi bakho.
IFulfillPanda inesona sisombululo sihle soHlelo lweFotohop kunye neendlela zokuhambisa inguquko.
Sivumele ukuba sibe ziingcali zakho! Sine studio enobuchule obunezixhobo ezifanelekileyo, kunye neefoto zobuchwephesha kunye neerououchers, ukukunceda ekwenzeni imveliso yokufota efunekayo kwinkampani yakho.
Nxibelelana nathi ngokukhawuleza!